News | Tag: back pain
ढाड दुखेर हैरान हुनुहुन्छ ? छुटकाराको लागि यसो गर्नुहोस
एजेन्सी । उमेर बढ्दै जाँदा शारीरीक समस्या आउनु अलग कुरा हो तर, गलत उठाइ–बसाइ, चोटको कारण, खानपानमा गडबडी हुँदा, गर्भावस्था र अन्य कारणले पनि ढाड दुख्न सक्छ । एकै ठाउँमा बसिरहँदा झनै ढाड दुख्ने समस्या बढ्न जाँन्छ ।
ढाड दुखेर हैरान भइयो ? यसो गर्नुहोस्
उमेर बढ्दै जाँदा शारीरीक समस्या आउनु अलग कुरा हो तर, गलत उठाइ–बसाइ, चोटको कारण, खानपानमा गडबडी हुँदा, गर्भावस्था र अन्य कारणले पनि ढाड दुख्न सक्छ । एकै ठाउँमा बसिरहँदा झनै ढाड दुख्ने समस्या बढ्न जाँन्छ । त्यसैले हल्काफुल्का काम गरिरहनु आवश्यक छ ।